Puzzles 🥇 Tinye ma nụ ụtọ ya site na Emulator.online
Cheta na: na-egwu mobile version bugharia ihuenyo
Ihe mgbagwoju anya N'okpuru anyị ga-egosi gị ihe niile ịchọrọ ịma iji ghọta egwuregwu a mara mma. Site na ihe omimi ya, mmalite ya, uru ya, udiri ihe mgbagwoju anya nke di na kwa usoro iji dozie ya ngwa ngwa.
Egwuregwu mgbagwoju anya: Esi egwu site na nzọụkwụ step
Imere a mgbaghoju anya online n'efu, naanị ị ga-eme soro ntuziaka ndị a nzọụkwụ site nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 2. Ozugbo ị banyere websaịtị, a ga-egosipụta egwuregwu ahụ na ihuenyo. Ikwesiri ime kụrụ egwuregwu ma ị nwere ike ịmalite ịhọrọ mgbaghoju anya kachasị amasị gị. Nwere ike ịhọrọ onyonyo kachasị amasị gị, na mgbe ịhọrọ yaNwekwara ike ịhọrọ ọnụọgụ nke iberibe ahụ.
Nzọụkwụ 4. Chịkọta iberibe ha niile n'ụzọ ọ bụla nke na ị họọrọ ihe okike ị họọrọ.
Nzọụkwụ 5. Mgbe ịmechara egwuregwu, pịa "Malitegharịa ekwentị" ime ihe mgbagwoju anya ndi ozo.
Gịnị bụ mgbaghoju anya? 🧩
Un mgbaghoju anyaỌ bụ Egwuregwu kere site na ọtụtụ mpempe dị iche iche ga-ejikọrịrị iji mepụta otu, n'ozuzu ya na ọnụ ọgụgụ, maapụ ma ọ bụ foto. Ọ bụ egwuregwu ochie. O doro anya na otu n'ime ihe omume ntụrụndụ kacha mma maka ụmụaka na ndị okenye. Ọzọkwa, na-enye aka na mmepe nke usoro uru nke psychomotor.
Mana onye ọ bụla chere na ọ bụghị n’oge na-adịbeghị anya ka e mepụtara ihe ịtụnanya ahụ abụghị eziokwu. Dị ka m kwuru, ọ meela agadi. Na mbu, ihe o meputara bu maka nzube ozo.
Mmalite nke ihe mgbagwoju anya ☝️
Ọ bụ ezie na ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme enweghị ike ikwu mgbe nsogbu ahụ pụtara, enwere echiche banyere mmalite ya.
Otu n'ime ndị kacha anabata bụ na onye na-ese foto Bekee, John Spilsbury, chepụtara egwuregwu ahụ. Iji mee ka ụmụ akwụkwọ ya mụta ọdịdị ala, na 1760 John mepụtara otu iberibe akụkụ ya na akụkụ ụwa. Ha niile guzobere maapụ ụwa. Iji mbadamba osisi na stilettos, Ogwe nyere ụmụ akwụkwọ ya ọ funụ na mmụta.
Ma ụfọdụ na-ekwu na ọ bụ ndị China mepụtara ihe omimi ahụ. Tangram Ọ bụ ihe eji egwuri egwu oge ochie na China. O nwere nani uzo asaa, ma ha ekwe ka e guzobere otutu onyogho. Mana, ọ dị iche na ebe a na-anụ ilu ahụ.
N'ezie, mgbe e mepụtara Spilsbury, mgbaghoju anya ghọrọ ihe ewu ewu. Nke ahụ bụ, ejiri aka mee ha, ya mere ha dị oke ọnụ. Bụ naanị na Industrial Revolution (1760-1820 / 1840) na mgbaghoju anya dị ọnụ ala. Nke a bụ n'ihi Ọganihu nke mgbanwe nke mgbanwe Ha nyere ngwaọrụ achọrọ iji mee ka ihe eji egwuri egwu ngwa ngwa ma dịkwa ọnụ ala.
N'oge oke ndakpọ akụ (1929), ihe egwuregwu ụmụaka nwere ọganihu na mmepụta. E nwere ọbụna mgbazinye mgbazinye mgbazinye maka 10 cents otu awa! Karịsịa, ndị mmadụ chọrọ afọ ojuju na afọ ojuju mgbe ha ji egwuri egwu.
Mmalite nke okwu a
Okwu Puzzle (ihe mgbagwoju anya na spanish) mara ama ma jikwaa ya n’ụwa niile. Mmalite ya bụ Bekee. Mgbọrọgwụ ya sitere na Latin, sitere na ngwaa Latin m ga-etinye (ọ pụtara tinye).
Otu esi eme ihe omimi: Atụmatụ
Họrọ mgbaghoju anya kacha dabara
Afọ na-egosi afọ na nkwakọ ngwaahịa ahụ na-enye aka, mana ekwesighi iji ya dị ka njirisi dịpụrụ adịpụ. Tụleekwa egwuregwu nwa gị maara na egwuregwu a. Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ enweghị ahụmịhe gara aga, nye mmasị n'ụdị nwere akụkụ ole na ole, ruo mgbe ọ ga-eme ya.
Nwee ebe kwesiri ekwesi
Ozugbo a zụtara mgbaghoju anya, ọ dị mkpa họrọ nhazi kwesiri ekwesi maka nzuko. Ọkacha mma, O kwesịrị ịdị jụụ ebe mmadụ na-anaghị enyo enyo.
Cheta na ọrụ a chọrọ nnukwu itinye uche na oke mkpọtụ ma ọ bụ mmegharị nwere ike igbochi. N'iburu nke ahụ n'uche, ọ bara uru ịhọrọ akụkụ nke ime ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọzọ nwere nnukwu tebụl.
Ọzọkwa, ọ dị oke mkpa ịnwe mmetụta ma ghara ịgbasa iberibe ahụ ozugbo ị banyere n'ụlọ, n'ihi na ha nwere ike ifu ụzọ, nke ga-emecha nwee nkụda mmụọ. Cheedị, mgbe ụbọchị nraranye gasịrị, ị ga-ahụ na onyonyo ahụ ezughi oke.
Jiri ndebiri dika ntuziaka
Iji ntuziaka dị ka ntụnye bụ ntụnye na-enweghị ike ileghara anya. Ọtụtụ oge, ihe egwuregwu ahụ n'onwe ya na-eweta mmeputakwa nke ihe oyiyi a ga-achịkọta.
Mee ka onye ọ bụla na-enyere aka na nzukọ mgbakọ ahụ nweta ihe nlereanya a, ka ha nwee ike zoo aka na ya mgbe ha nwere ajụjụ. N'okwu ahụ, itinye uche na nkọwa zuru ezu nwere ike ime mgbanwe na ngwụcha ngwangwa.
Malite na iberibe nkuku
Ndụmọdụ ikpeazụ anyị metụtara ịkọwapụta usoro nkwekọrịta kacha mma, ya onwe ya. N'echiche a, a na-atụ aro ịmalite na nkuku, onye iberibe ya nwere akụkụ kwụ ọtọ. Zọ a, i nwere ike na oru ngo ikpeazụ size nke ihe oyiyi.
Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ nke iberibe dị nnọọ ukwuu, ndị kasị ibu n'ụwa na-eweta ọnụ ụfọdụ nnukwu 40 iberibe , mgbakọ nzukọ nwekwara ike ịbụ nnukwu ihe ọzọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na enwere ụmụaka itinye aka. Onye ọ bụla n'ime ha nwere ike ibu ọrụ maka obere iberibe ma okenye ga-eburu ọrụ maka ijikọ ha.
Fọrọ nke nta ka njedebe, anyị na-enye otu nduzi ọzọ: ịmanye ihe kwesịrị ekwesị n'etiti iberibe ahụ bụ àgwà na-enweghị isi. Mgbe ị chọpụtara na ha anaghị arụkọ ọrụ, chọọ ụzọ ọzọ ka ị ghara imebi ha.
Abamuru nke igwu egwuregwu mgbagwoju anya😀
'Ve nụla nke ọma na mgbaghoju anya uru. Thiszọ ụdị egwuregwu a si eme ka ụbụrụ bụrụ ihe dị egwu ma mechaa nweta ọtụtụ uru maka ndị nọ n'afọ ndụ dị iche iche.
Gbakọta obere akụkụ na ike na-etolite a panel na njedebe bụ a ezigbo mmega ahụ maka ndị agadi, ndị okenye, ndị ntorobịa na ụmụaka, ọkachasị ndị nọ n’ọzụzụ.
Na mkpokọta, mgbaghoju anya dị mma maka ncheta na mgbe etinyere ya n'ụlọ akwụkwọ, ọkachasị na agụmakwụkwọ nwata, ọ na-eme ka mmụta dị ukwuu. Youchọrọ ịmatakwu banyere uru nke iji ngwá ọrụ a n'ụlọ akwụkwọ, gịnị bụ iwu ya ma ọ bụ uru ndị ọ na-enye ndị na-achọ ịmekọ ihe omimi? Nọgide na-agụ ihe.
1- Ihe mgbagwoju anya na - akpali ụbụrụ
Onyinye mbu nke mgbaghoju anya di na ọgụgụ isi, ebe mgbaghoju anya na-akpali ụbụrụ. Ya mere, na mmepe nke nkà mmụta uche ọ bụ nnukwu uru.
Ihe omume a nwere mmetụta na ikike nwatakịrị idozi nsogbu, na-amụba echiche ma melite nkà gị. Ihe omuma nke onu ogugu, agba, odidi, map, oghere, uzo, na otutu ihe omuma ndi ozo nwere ike kpalie.
2- Ihe mgbagwoju anya dị mma maka ebe nchekwa
Akụkụ ọzọ dị mkpa nke iji ihe omimi bụ na ọ dị mma ncheta . Onyinye a dị oke mkpa maka ndị nwere nsogbu metụtara ichefu.
Nke a na - eme, ya mere, ịchọta mpempe akwụkwọ kwesịrị ekwesị maka nke ọ bụla na - eme ka onye ahụ nwee ozi gbasara ụdị na ụdị abụọ ha nwere. You nwere ike iche n'echiche itinye ọrụ a maka ndị agadi nwere nsogbu ncheta?
3- Ihe mgbagwoju anya na - amalite nhazi moto
E nwere oge nke nwata ọ dị obere ka ụmụaka zụlite ikike ngagharị ha. Aka ya na mkpịsị aka ya amabeghị ebe dị anya na ịkpụzi ihe.
Ya mere, ihe mgbagwoju anya nke ndị na-ege ntị na-eche kpalie nhazi nke moto ọbụlagodi na nwata . Gbalị itinye otu obere ibe na nke ọzọ bụ ihe mkpali dị ukwuu iji jikwaa mmegharị nke ogwe aka, anya, na aka.
Agbanyeghị, a ga-emegharị ihe omimi a ka ọ bụrụ afọ ole nwata ahụ dị, buru ibu, nwee agba mara mma na ntinye dị mfe. Ọ na-emetụtakwa ndị okenye ma ọ bụ ndị agadi nwere nrụgide nhazi.
4- Ihe mgbagwoju anya n’eme ka mmekorita mmadu
Oge ụlọ akwụkwọ bụ oge mmegharị maka ụmụaka. Nhazi nke ndi enyi na njirimara nke ndi otu na echiche nke ndi mmadu bu ebumnobi di nkpa maka umu akwukwo.
Na iji mezuo ebumnuche a, mgbaghoju anya bu ezigbo ihe eji eme ka mmekorita . N'oge egwuregwu, ụmụaka nwere ike ịmekọrịta, imekọ ihe ọnụ, ịsọ mpi, mmeri, arụmụka, isoro klas niile kerịta ọganiihu na ọdịda.
5- Ihe mgbagwoju anya na-akwado echiche
Egwuregwu a na-emekwa ka echiche ụmụ akwụkwọ mara. Uzo nke ikiri, tulee, inyocha na iweputa echiche bu ihe aga eme na akwukwo nwata akwukwo obula .
Uru ndị a ruru oge uto na ịbụ okenye, bụrụ ndị e ji kpọrọ ihe nke ukwuu na ngalaba ọkachamara. The nghọta nke nnukwu ụlọ ọrụ, nke ahịa ohere nwere ike a mụrụ na nwata, na kwesịrị ekwesị stimuli.
Ofdị egwuregwu mgbagwoju anya🧩
Na ahịa, ihe mgbagwoju anya nwere ọtụtụ nsụgharị. Ma ọ bara uru na-echeta na ha nwere ike ịnwe akụkụ dị iche iche na ọ bụghị naanị ndị a kwụgoro n’elu ala na otu akụkụ.
Mostdị egwuregwu mgbagwoju anya kachasị: Bedlam Cube, Ime Anwansi Anwansi, Sum Cube, Pentaminos na Tangram. Chọpụta nkọwa ndị ọzọ gbasara ụdị Puzzles ndị a:
Bedlam ji cube
Egwuregwu a nwere Iberibe 13 nke mejupụtara otu cube zuru oke.Ọ bụ ihe omimi nke Bruce Bedlam chepụtara. Na mkpokọta, enwere mpempe iri na atọ mebere cubes. Ebumnuche bụ iwu ụlọ 4 x 4 x 4 ma mepụta ihe, ebe ọ bụ na ihe ịma aka bụ ịchọta otu n'ime ụzọ karịrị puku 19 iji mee ya.
Versiondị a bụ ihe kachasị ewu ewu n'etiti egwuregwu mgbagwoju anya na usoro 3D.
Ihe anwansi anwansi bu ihe ochie anyi maara. Aha aha ya bụ Rubik's Cube, aha nke na-asọpụrụ onye mepụtara ya, Ernő Rubik si Hungary. Emepụtara ya na 1974 ma a mụọ ya nnukwu - ọ meriri egwuregwu nke onyinye afọ ahụ. 1980s bu njedebe nke ihe omimi a, nke ka gbasa rue taa.
Ha bụ cubes polyethylene nke jikọtara ọnụ.
Nke a bụ ụdị egwuregwu mgbagwoju anya ọzọ. Piet Hein chepụtara ya, onye mepụtara ya mgbe ọ gụsịrị klas ndị na-ahụ maka igwe ọkụ. Egwuregwu ahụ na-eji cubes polyethylene cubes asaa nke jikọtara ọnụ mejupụta 3 x 3 x 3. Akụkụ ndị a mejupụtara karịa ụdị nchịkọta 240.
Ihe omimi a nwere a na-edozi ya n'ámá ise. Na ngụkọta, e nwere 12 Pentaminó formats. Ihe omimi a mere ka egwu egwu Tetris ma obu Rampart. Egwuregwu a sitere n'ike mmụọ nsọ Tetris a ma ama.
El tangram O nwere nani mpempe asaa nwere ike ịmepụta ihe karịrị 5,000 ọgụgụ.
Nke a bụ ihe mgbagwoju anya ma obu jigsaw ọdịnala, ma e jiri ya tụnyere ụdị ahịa ndị ọzọ taa. Amuru ya na China nwere nkpuru asaa ma ha na enye otutu onu ogugu. Otu akwụkwọ nkà ihe ọmụma gara n'ihu ikwu na ọ ga-ekwe omume ịnakọta ihe karịrị ọnụ ọgụgụ 5,000. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ mmụọ nsọ maka egwuregwu egwuregwu mgbagwoju anya nwere ụdị ama ama taa.
El ihe mgbagwoju anya akpọrọ "Keith Haring: nyocha abụọO nwere iberibe 32,256, ihe dịka 5.44mx 1.92m na ngwugwu ya na-atụle 17kg dị egwu.
Mmeputakwa nke eserese "Mgbanwe"site na Jackson Pollock a na-ewere otu n'ime egwuregwu mgbagwoju anya kachasị ike itinye ọnụ.
Na 1997, na Peru, otu ndị agha okpuru Movimento Revolucionario Tupac Amaru wakporo ụlọ nke onye nnọchi anya gọọmentị Japan, yana ndị karịrị mmadụ iri asaa na abụọ ndị ejidere na nkụda mmụọ maka mkparịta ụka a, ha rịọrọ ka a Mpempe akwụkwọ 2,000. Nke a bụ ka ndị e jidere nwee ike ịnụ ụtọ egwuregwu ma ghara ịkpata nkata site na mkparịta ụka.
Na 1933, na mgbagwoju anya ha malitere ibu kaadiboodu. Nke ka nke bụ na o mere ka ọ dị ọnụ ala, ọ na-ere ahịa ihe dị ka nde iri kwa izu!